Amasayithi Wokulanda Izincwadi Mahhala | Izincwadi Zamanje
Izincwadi ziyaqhubeka ngaphandle kokwehlisa intengo futhi abaningi ukuthola izingosi zokulanda izincwadi mahhala kuyinduduzo enkulu. Sibonga u Internet basavulekile ukwabelana ngamasiko kwamanye amawebhusayithi. Ikhasi le- Isayensi Yezenhlalo Yesimanje ihumushe uhlu lwamasayithi esiNgisini lapho singathintana khona futhi silande (imisindo) imibhalo yakudala neyesimanje ngezihloko ezahlukahlukene.
Amasayithi wokulanda ama-ebook amahhala
Bartleby: IBartleby inelinye lamaqoqo amahle kakhulu ezincwadi, amavesi nezincwadi eziyinkomba ezinokufinyelela kwamahhala.
IBiblomania: Iqoqo elikhulu lemibhalo yakudala, izincwadi zokubhekisisa, izindatshana, kanye nemihlahlandlela yokufunda.
I-Books-On-Line: Isiqondisi esinezincwadi ezingaphezu kuka-50.000 XNUMX (iningi lazo limahhala). Ukuseshwa kwezincwadi kwenziwa ngumbhali, isihloko noma igama elingukhiye.
Izinqolobane zezincwadi: Le sayithi inezincwadi ezingaba yikhulu ngabalobi abahlukene abangama-100. Izincwadi zingafundwa ku-inthanethi noma zilandwe ngo PDF.
I-Bored.com: Izinkulungwane zezincwadi zakudala ongazifunda noma uzidlulisele kwikhompyutha yakho. Kungenzeka uthole izincwadi ngomculo, imidlalo, ukupheka, isayensi nezokuvakasha.
I-Classic Book Library: Umtapo wolwazi wamahhala oqukethe ama-e-book wezothando, imfihlakalo, inganekwane yesayensi nemibhalo yezingane.
Ishelufu lezincwadi zakudala: Umtapo wolwazi we-elekthronikhi wezincwadi zakudala. Inesicelo esikhethekile sokufunda sokubukwa okulula kwemibhalo.
I-Classic Reader: Ukuqoqwa kwezinganekwane eziyinganekwane, izinkondlo, izindaba zezingane nemidlalo engaphezu kuka-4000 esebenza ngamakhulu wababhali.
Ukubhebhana Ebook: Amakhulu ebooks mahhala ahlukaniswe ngezigaba ezisukela ebhizinisini nakubuciko kuya kwisayensi yamakhompyutha nemfundo.
I-EtextCenter: Ngaphezu kuka-2.000 ebooks mahhala e-Etext Center Library, University of Virginia. Kubandakanya izincwadi eziqanjiwe zakudala, izincwadi zezingane, imibhalo yomlando namaBhayibheli.
Ama-eBooks Wenganekwane aku-inthanethi: Amakhulu emidlalo, izinkondlo, izindaba ezimfushane, izincwadi zezithombe, namanoveli akudala.
Fiction Wise: Free science fiction works. Ibuye ibe nesitolo sezincwadi.
Izincwadi Ezigcwele: Izinkulungwane zezincwadi eziphelele zezintshisekelo ezahlukahlukene ezi-odwe ngesihloko.
Thola Izincwadi Zamahhala: Izinkulungwane zezincwadi zamahhala cishe kuzo zonke izihloko ongazicabanga. Lezi ziyatholakala ukulanda ngokushesha.
Izincwadi Ezinkulu Eziku-inthanethi: Ukuqoqwa okukhulu kwezihloko oku-ode ngababhali. Ngaphezu kokunikeza imibhalo ngefomethi ye-HTML, inikezela ngomugqa wesikhathi womlando womuntu kanye nesigaba sezixhumanisi zewebhu mayelana nombhali ngokubonisana.
Hans Christian Andersen: Iqoqo elimangalisayo lezindaba nezinganekwane zikaHans Christian Andersen.
I-Internet Public Library: Iqukethe i-anthology enezihloko ezingaphezu kwezingu-20.000 XNUMX.
Imibhalo yeFantastic: Iqoqo elincane lezincwadi eziqanjiwe zesayensi nezinganekwane ezinezixhumanisi zamaqembu ezingxoxo.
Umsebenzi Wezincwadi: Ukuqoqwa kwamahhala kwemibhalo yakudala nezinkondlo. Leli sayithi line-software yokufunda ngezwi ongayilanda khona lapho.
Izinkinobho zomlingo: Izindaba ezinemifanekiso zabantu bayo yonke iminyaka.
Izincwadi eziningi: Ngaphezu kuka-20.000 ebooks mahhala kumfundi wakho i-ebook, I-PDA noma i-iPod.
Imibhalo Yobungcweti I-database yamahhala equkethe ubuciko bemibhalo esingabacinga ngesihloko, isihloko kanye nomlobi.
Iphrojekthi Yencwadi evulekileIndawo eqondiswe emphakathini ehlinzeka ngezincwadi zamahhala nezinye izinto zokufunda online.
Ikhasi Ngamabhuku Ezincwadi: Amakhulu ezincwadi zakudala ezingafundwa ikhasi ngalinye.
Project Gutenberg: Ngaphezu kwezihloko ezingama-25.000 zamahhala zitholakala ku-Project Gutenberg. Ngokwengeziwe, kunezinye izihloko eziyi-100.000 ngabalingani bayo abaxhumene nabo.
Izincwadi Zomphakathi: Iqoqo elikhulu lezincwadi ezisezingeni eliphakeme ezinababhali bakudala nemisebenzi yanamuhla evela emhlabeni wonke.
Funda Phrinta: Umtapo wezincwadi wamahhala online ngezinkulungwane zezincwadi, izinkondlo nemidlalo yeshashalazi yabafundi nothisha
Ref Desk: Ukuhlanganiswa okukhethiwe kwama-encyclopedia nezinye izincwadi zokubhekisela.
Ikhasi Lezincwadi Eziku-inthanethi: Uhlu lwezincwadi zamahhala ezingaphezu kwezingu-30.000 ezibanjwe kuwebhusayithi ye-University of Pennsylvania.
Umtapo Wezincwadi Wedijithali wasePerseus: Iphrojekthi eyenziwe i-Virtual Library ye-University of Tufts enemibhalo yakudala neyezwe le-Renaissance.
Sithemba ukuthi lawa masayithi azokusiza kulokho okufunayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » Amasayithi wokulanda izincwadi mahhala
UFredo nedi kusho
Ukuba incwadi ngolimi lweSpanishi, kimi kubonakala kungubudedengu noma ukubheka okukhulu kakhulu ukuthi angifakanga amawebhusayithi ezincwadi ngeSpanishi, lokhu kube wulimi lwesibili olukhulunywa kakhulu emhlabeni.
Phendula uFredo Nedi
Sawubona Fredo. Siyaqonda ukuthi akuwona wonke umuntu okwazi ukuphatha kahle isiNgisi, yingakho kulesi sixhumanisi kubhalwe kwenye iwebhusayithi yomshicileli wethu http://www.todoereaders.com/lista-de-sitios-para-descargar-ebooks-gratis-de-forma-legal.html uzothola amasayithi angapheli ngeSpanishi lapho ungalanda khona izincwadi ngokuphelele futhi ngokomthetho. Ozithobayo futhi ngiyabonga ngokuphawula kwakho.